I-China DAM1 Series Thermal Overload Operation Molded Case Circuit Breaker (uhlobo olungaguquki) ifektri nabakhiqizi | I-DaDa
I-DAM1 Series Thermal Overload Operation Molded Case Circuit Breaker (Uhlobo olungaguquki)
Ama-Breaker Circuit Thermal-Magnetic
Umsebenzi wokuvikela ukushisa: (Ukuvikelwa ngaphansi kwezimo zomthwalo ongaphezulu)
I-Bimetal, enikela ngokuvikelwa okushisayo, iqukethe inhlanganisela yezinsimbi ezimbili ezinama-coefficients wokunwebeka ahlukahlukene ngaphansi kokushisa. Lapho i-bimetal ishiswa, igobela ngasensimbi ngokunwetshwa okuncane. Ngale ndlela, kukhishwa i-notch esiza ukuvulwa kwendlela ye-breaker ukukhubaza i-breaker. Ijubane lokugoba le-bimetal lilingana ngqo nosayizi wamanje odlula ku-breaker. Ngoba, ukwanda kwezindlela zamanje kukhuphuka kokushisa. Ngale ndlela, ngaphezu kokuvikelwa kwamanje komsebenzi we-breaker kugcwaliseka nge-bimetal emithanjeni yokulayisha ephakeme kunamanje yamanje elinganisiwe
Umsebenzi wokuvikela iMagnetic (Ukuvikelwa ngaphansi kwezimo zesifunda ezimfushane)
Omunye umsebenzi we-breaker ukuvikela isekethe exhunyiwe kuma-circuits amafushane. Ukujikeleza okufushane kungenzeka ngenxa yokuthintana kwezigaba komunye nomunye noma ukuxhumana kwe-phase-ground. Njengoba umsinga ophakeme kakhulu uzodlula ezintanjeni uma kwenzeka isifunda esifushane, amandla wesistimu kufanele aphulwe ngesikhathi esifushane ngenxa yokuvikelwa okushisayo. I-Breaker kufanele ivule ngokushesha ukuvikela umthwalo oxhunywe kuwo. Ingxenye egcwalisa lo msebenzi iyindlela yokuvula esebenza ngomazibuthe obangelwa amandla kazibuthe
indawo eyenziwe ngumbuso wesifunda omfushane
Ukufakwa okulula okuzimele kwamadivayisi asizayo:
Oxhumana naye osizayo;
Ngaphansi kokukhishwa kwamandla;
Indlela yokusebenza kagesi;
Idivayisi yokudweba ;.
• Isethi ejwayelekile yekhefu ngalinye lesifunda liqukethe amabhasi wokuxhuma noma ama-cable lugs, izihlukanisi zesigaba, isethi yezikulufo namantongomane okufakwa kwiphaneli yokufaka.
Ngosizo ngocingo olukhethekile amayunithi angama-125 no-160 angafakwa kwisitimela se-DIN.
• Isisindo nobukhulu balaba badilizi besekethe baphansi ngo-10-20% kunalokho okushiwo abanye abakhiqizi bezindlu. Leli qiniso lihlinzeka ngokufaka amabhokisi amancane namaphaneli. Ngaphandle kwalokho, ubukhulu obuncane benza kube nokwenzeka ukushintsha ama-breakers wesekethe amadala abe yi-DAM1.
Ama-breakers wesifunda abunjiwe angama-low-voltage circuit breakers. Bahlangabezana nezidingo zokufakwa kwabasebenzisi abancane kuze kufike eziteshini ezinkulu zezimboni nasezinhlelweni zokusatshalaliswa kwamandla. Zivame ukusetshenziselwa izigayo zensimbi, amapulatifomu kawoyela, izibhedlela, izinhlelo zezitimela, izikhumulo zezindiza, izikhungo zamakhompiyutha, izakhiwo zamahhovisi, izikhungo zemihlangano, izinkundla zemidlalo yaseshashalazini, izakhiwo zezakhiwo, nezinye izakhiwo ezinkulu.
Amapharamitha kagesi we-DAM1 MCCB Ikesi Leseli elibunjiwe
Uhlobo lwe-Thermal-magnetic fixed MCCB
• Icu:Ukuhlolwa kwe-Ot-CO (O: Vula ukuqondisa, I-CO: Ukuvula okuvulekile, t: Isikhathi sokulinda)
• Izithonjana:Uhlolo lwe-Ot-CO-t-CO (O: ukuvula okukhanyayo, i-CO: Ukuvulwa kwe-Open-Open, t: Isikhathi sokulinda)
ON / I Isikhundla: Kubonisa ukuthi oxhumana nabo be-breaker bavaliwe. Kulesi sikhundla, i-lever breaker isendaweni ephezulu
Isikhundla SOKUHAMBA: Kubonisa ukuthi i-breaker iyavulwa ngenxa yanoma ikuphi ukwehluleka (ngaphezu komthwalo noma isifunda esifushane). Kulokhu, i-breaker lever isendaweni ephakathi nendawo phakathi kwe-ON ne-OFF positions. Ukuze uthathe i-breaker, esendaweni yohambo, uye ku-ON position; Cindezela i-lever yekhefu phansi njengoba kukhonjisiwe uphawu lwe-OFF
I-Breaker izosethwa ngomsindo "chofoza". Emva kwalokho, donsela isigwedlo njengoba kukhonjisiwe ngophawu lwe-ON ukuvala ikhefu
Isikhundla se-OFF / 0: Sikhombisa ukuthi oxhumana nabo be-breaker bavulekile. Ngale ndlela, i-lever breaker isendaweni engezansi.
Amapharamitha Womzimba We-DAM1-125 MCCB Ikesi Leseli elibunjiwe
Isigaba (EN 60947-2 / IEC 60947-2)
Indawo ye-Dielectric (V)
isizungu ibanga (mm)
I-A / B
Usayizi we-MCCB Case Case Circuit Breaker
Langaphambilini I-DAM1 Series Thermal And Magnetic Adjustable Type Molded Case Circuit Breaker (MCCB)
Olandelayo: I-DAM3-160 MCCB Case Circuit Breaker Ephukile
I-Mccb 1000 Amp
DAM1 Series Electronic Uhlobo Okulolongwa Case Circui ...
DAM1 Series Thermal Futhi Magnetic Uhlobo ashintshekayo ...